musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tsvaga Inonakidza Rolli Mazuva muCultural Genoa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Rolli Mazuva muCultural Genoa
Vashanyi vanozove nemazuva manomwe anoshamisa ekutsvaga hunyanzvi hweItari mune yakakura Renaissance uye Baroque dzimba dzehumambo dzeGenova Guta muItari.
Kufamba kuenda kuGenoa kwemazana emakore egoridhe, pakati pezvivezwa, mafrescoes, uye mapindu, ndiko kuvhurwa kunoshamisa kwezvivakwa zveUNESCO World Heritage.
Chiitiko ichi chinoitika kubva muna Gumiguru kusvika 4, 8, panguva yeRolli Shipping Vhiki, uye kubva Gumiguru 2021 kusvika 9 naRolli Mazuva.
Kwenguva yekutanga, mwaka wekuvhuvhu uyu, iyo Rolli Mazuva - chiitiko chinovhura masuo ePalazzi dei Rolli, UNESCO nhaka - ichagara kwevhiki.
Pfuma yeguta rekuvaka iri pamusha wezvigadzirwa zvinobatanidza hunyanzvi hweItari - Canova, Antonello da Messina, mafrescoes ezana ramakore rechi17, violin dzePaganini, nehunyanzvi hwekuEurope, kunyanya hunyanzvi hweFlemish.
Vhiki rino mukana wekutsvaga nhoroondo yeguta, imwe yemachiteshi makuru eMediterranean, kwete kure neAlps uye Milan. Vashanyi vanosangana neGenoa isina kumboonekwa, izere nedzimba dzinoyevedza idzo kwemazana emakore dzakachengeta godo ravo negodo: zvivanze, magadheni, macircuit emifananidzo, zvivezwa kubva kunopera Renaissance, uye Baroque.
Iko kushanya kunoitwa mukuchengetedzeka kwakazara uye mukuteerera mirau yeCOVID - yemahara, asi nechisungo chekuchengetedza, uye kuvhurwa kwemuzinda kunoperekedzwa nekarenda yakafuma yezviitiko zvechibatiso.
Kushanya kumizinda yamambo uye zviyeuchidzo zvinotanga panguva yeRolli Shipping Vhiki (Gumiguru 4-8) mukubatana na Genoa Kutumira Svondo, chiitiko chegore rimwe chinounza pamwechete vashandisi vengarava, vezvikepe, uye zvekushandisa kubva pasirese. Iwo madzimba anogamuchira makongiresi uye zviitiko zvetsika, kunze kwenzanga yegungwa - mugari wenhaka yekare nhoroondo, iyo yeMaritime Republic iyo yakavhurika kune veruzhinji.
ruremekedzo rwaLaura Guida
Iwo chaiwo maRolli Mazuva (Gumiguru 9-10) akakosha pakuziva iro guta nekumhanyisa kwako wega, inotungamirwa nenyaya dzevashandi uye vanotaura nesainzi avo vakataura nyaya, anecdotes, uye zvishamiso zve "Superba," mambokadzi weMediterranean. Mazuva maviri evaraidzo isingamire uye kushanya kunoyemura zvivakwa zvinonakidza zveguta - dzimba dzeRolli uye dzimba dzekugara, magadheni, mamuseum, uye matura, zvinosanganisira zvivakwa zvakavhurika kuruzhinji zvechiitiko ichi.
Semuenzaniso, zvivakwa zvinoyevedza zveStrada Nuova - inoshamisa Palazzo Doria Tursi, nemagadheni ayo maviri - inoratidzira violin naPaganini, muunganidzwa wehunyanzvi hweFlemish, uye hunyanzvi hwakafanana nePenitent Magdalene naAntonio Canova. Palazzo Bianco inopa muunganidzwa weItari, Flemish, neSpanish mabasa ehunyanzvi, nepo Palazzo Rosso achishamisika nemidziyo yayo yekutanga uye pikicha yemifananidzo ine mifananidzo yaVeronese, Guercino, Dürer, naVan Dyck.
Mumugwagwa mumwe chete, Palazzo Nicolosio Lomellino inogadzira unicum, iine dzimba dze stucco dzakashongedzwa nefrescoes yezana ramakore rechi 17 uye bindu rakavanzika rakavanzika nezvivezwa zvengano. Kushanya kuPalazzo Stefano Balbi, chigaro cheRoyal Palace Museum, ndiwo mukana wekuwana hupenyu hwevanokudzwa veGenoa nevekuItaly vezana ramakore rechi17, apo vachiyemura Horo yeMagirazi, Kamuri reChigaro, neBallroom.
Pauriri hwepamusoro hweSpinola di Pellicceria Palace, inogara iyo National Gallery yeLiguria, mumwe anouya akatarisana ne "Ecce Homo" inyanzvi yeAntonello da Messina. Iyo Palazzo della Meridiana inosiyaniswa neRusununguko dhizaini yemugadziri - Coppedè, uye Palazzo Centurione Pitto anokwikwidza zvivakwa muVia Garibaldi yema fresco macircuit.
Kunze kwenzvimbo inozivikanwa ndeye Villa del Principe, inogara Renaissance yaCharles V, umo Admiral Andrea Doria akakomberedzwa nebindu rinoyevedza reItaly rakatarisana negungwa.
Pakati pezvivakwa zvinoyevedza zveguta remumaguta zvakavhurwa chiitiko ichi, kune zvakare zana ramakore rechi16 Villa Imperiale, inochengetera raibhurari yeLercari. uye ine paka yezana ramakore rechi18 ine gadheni remhando yeItaly; nzvimbo tsvene uye imba yemitambo yemuchato yakanyorwa muna 1785; uye Villa Spinola di San Pietro, wezana ramakore rechi 17 patrician domus iri munzvimbo yeGeoese naSampierdarena.
Rolli Mazuva Live & Dhijitari chiitiko chakasimudzirwa uye chakarongedzwa neMasipala weGenoa mukubatana neChamber reCommerce reGenoa, Ministry of Culture - Regional Secretariat yeLiguria, iyo Rolli Association yeGenoese Republic, uye University of Genoa.